Fepetra fampihibohana :: Nameno tanàna ny mpitandro filaminana • AoRaha
Nanomboka niparitaka tamin’ny faritra maro teto an-drenivohitra sy ny manodidina ny mpitandro filaminana, omaly, nanaramaso an’ireo olona tsy manaraka ny fepetra amin’ny fiverenana amin’ ny fihibohana ho an’ny faritra Analamanga. Nisy ireo voasazy, na dia maro ihany koa aza ireo tsy fanarahana fitsipika ara-pahasalamana tsikaritra teny rehetra teny, na tamin’ny mpandeha an-tongotra, na ny fiara tsotra sy fitaterana, na tamin’ireo mpivarotra.
Mbola nisy hatrany ireo voasazy noho ny tsy fanaovana arontava. Betsaka ihany koa ireo fivarotana nakatona. Roa amby dimampolo ny fitambaran’ny olona voasazy nampanaovina asa ho tombontsoan’ny daholobe (TIG) nandritra ny iray andro tany amin’ ny faritra ivelan’Antananarivo, ny tapak’andro marainan’ny omaly, araka ny tatitra avy amin’ny Zandarimariam-pirenena. Tsy nahazoana tatitra ny avy amin’ny Polisim-pirenena momba ireo tratra teto an-drenivohitra. Nisy kosa, ankoatra ireo, ny môtô tratra nanao taingin-droa sy olona noravana noho ny fitangorongoronana. Tonga hatrany an’elakelantrano ny mpitandro filaminana nijery an’ireo minia mandika ny fepetra amin’ny fihibohana.
Tsikaritra ho tsy niova ny vidin’ny entana ilaina andavanandro, raha ny hitan’ny mpitandro filaminana teny an-kianja. Nampahafantarina amin’ny tsy fahafahany mivarotra, tetsy an-kilany, ny mpivarotra tamin’ireo fivarotana tsy tokony hisokatra toy ny toeram-pisotroana, fivarotana finday sy kojakojan-dakozia. Anisan’ny nahitana olona maromaro tsy nanao aron-tava teny amin’ny faritra Anosy sy Anosibe, izay tsy latsaky ny valo ambin’ny folo, hatramin’ny 11 ora antoandro. Sivy kosa ireo tratra teny Ambohimanarina sy ny manodidina. Nambaran’ny polisy iray niasa teny Anosibe fa nisy ny môtô nanao taingin-droa izay nilaza ho tsy nahafantatra ny fepetra vaovao, ka voatery nosakanana sy nomena fampitandremana.
Valanaretina eto Antananarivo :: Mihoapampana hatrany ny isan’ ireo mararin’ny Covid-19
Efa ampiasaina hanafainganana ny famoahana voka-pitiliana ny GeneXpert